तिथि मेरो पत्रु » तपाईं साँच्चै ठेगाना गर्ने आवश्यकता के: शिष्टता राजा छ
उनी आफै हेरचाह गर्न जान्नुहुन्छ र त्यो के चाहन्छ पछि जान्छ जो एक बलियो स्त्रीको हुन समकालीन संस्कृति आग्रह गर्नुपर्छ. त्यो वास्तवमा यति बलियो छ, त्यो ढोका उनको लागि खोलिएको छ आवश्यकता गर्ने केटी को प्रकार छैन कि. त्यो एक pushy रोमान्टिक ओवरचर रूपमा फूल हप्काउँछ र उनको आर्थिक स्वतन्त्रता को लागि एक अपमान रूपमा खाने को लागि तिर्ने लिन चाहन्छु. यहाँ एक गोप्य पुरुषहरुको: तपाईं एक पहिलो तारीख मा एक कम्पनी बाहिर को सीईओ ले या केटी डेटिङ गरिरहनुभएको होस् जो अनुचित रोमान्स derides, शिष्टता साँच्चै खेल मा आउन आवश्यक छ, र सधैं उनको swoon बनाउँछ.
बहस नगर्नुहोस्, बस एक मौका ले
मानिसहरूले आधुनिक दिन भनेर बहस गर्न सक्छन्, नारीवाद विरुद्ध रूपमा स्वतन्त्र स्त्रीको उदारचेता परम्परा internalize सक्छ. यी दिन, हो, पुरुष र महिला धेरै ज्यादा बराबरी हो, तर शिष्टता भेष महिलाको सामाजिक अन्याय महिला शोषणको वकालत वा perpetuating छैन. केवल7महिलाको प्रतिशत उदारचेता कार्यहरू जस्तै महसुस, यस्तो खुला ढोका धारण रूपमा, संरक्षण हो, डेली मेल अनुसार. यद्यपि, अभिजात वर्ग दैनिक मा एक मानिस अनुसार, अन्य 93 को प्रतिशत महिला यी उदारचेता प्रेरित लागि सोधेर छैन. उदारचेता undertones कुरा बढी महिला आशा गर्नुपर्छ हो, र अधिक पुरुषहरु समावेश गर्नुपर्छ.
त्यसैले सायद शिष्टता मरेको छैन, यो गलत अर्थ गर्नुपर्छ. टेलीग्राफ को Louisa मयूर मानिसहरू उदारचेता प्रेरित misconstrued हुनेछ भन्ने डरले शिष्टता जोगिन वा गलत संकेत पठाउन भनेर भन्छन्. यस डिजिटल युग मा, एक पाठ सन्देश प्रतिक्रिया वा भोल्युम कुरा गर्न सक्छन् एक Instagram चित्र रुचि छैन, अझै hieroglyphics रूपमा अर्थ रूपमा गाह्रो हुन. हामी एक सामाजिक भ्रमित संस्कृति हुन सक्छ कि विश्लेषण र दोस्रो guesses मा, यो डेटिङ र रोमान्स गर्न आउछ विशेष गरी. हाम्रो राष्ट्र पहिलो महिला राष्ट्रपति elects तापनि, एक मानिस ल्याउन सोच्छ भने पनि गुलाब सेक्स लागि चारा जस्तै दिखेगा, महिला उदारचेता छ जो एक मानिस कदर. त्यो राजकुमार आकर्षक मुक्ति पाउन आवश्यक छ, जो एक नाजुक राजकुमारी किनभने शिष्टता एक कमजोर महिला गोद मा उठाए झुला छैन. यो शिष्ट छ, एक प्रकारको इशारा र प्रेम र आदर अभिव्यक्ति. महिला अझै पनि मिति खाएका हुन चाहन्छौं. ब्ययफ्रेंडस अझै पनि भक्तिको देखाइने गर्न चाहनुहुन्छ. पत्नी अझै पनि आनंदित हुने आशा.
उनको व्यवहार गर्न कसरी
शिष्टता एक मानिस एक पुरुष र स्त्रीले एक महिला जस्तै महसुस हुन बनाउँछ. शिष्टता र रोमान्टिक हाउभाउ यी कार्यहरू आफ्नो जीवन मा महिला व्यवहार, तपाईं दोस्रो मिति मा जाँदै हुनुहुन्छ वा विवाह भएको छ कि 10 वर्ष.
उनको जन्मदिन मा फूल उनको चकित, प्रणय दिवस वा बस, किनकी. फूल पठाउँदै, भव्य FTD जस्तै गुलदस्ते गुलाब, रोमान्टिक Cliche हुन सक्छ, तर महिला समय को अन्त सम्म यो इशारा प्रेम गर्नुहुनेछ.
त्यो तपाईं छौ सबै छ उनको बताएँ. उनको अनुहार-गर्न-अनुहार बताएँ. यो पाठ. एक मा यो लेख्नुहोस् पोस्ट-यो. बस त्यो कहिल्यै बिर्सनुहुन्न पक्का.
सडक नजिकै हिंड्न, यातायात पार गर्दा र उनको हात पकड. तपाईं आफ्नो सुरक्षा सुरक्षा छौं भने महसुस मनमोहक छ.
एक राम्रो खाना उनको लिनुहोस्. तैपनि सँगै ओछ्यान मा पिज्जा खाने वर्ष पछि, एक राम्रो खाना कि स्पार्क rekindles. हो, उनको लागि कार ढोका खोल्न अगाडी हिंड्न.
अप्रत्याशित रूपमा उनको हात लो. तपाईं कफी लागि लाइन मा टिभी वा जबकि हेर्न गर्दा आफ्नो हात पकड. हृदय स्पंदन हुनेछ.
एक तारीख देखि पहिले ढोकामा उनको अभिवादन, र त्यसपछि ढोका उनको हिंड्न. कि यो फिल्म मा गरेको कसरी गर्ने हो.
जाँच-मा पुकारा, बरु पाठ भन्दा. त्यो एक फोन कल गर्न आफ्नो जीवन र पर्याप्त महत्त्वपूर्ण मा अग्रणी महिला हो.
उनको बधाई. त्यो सुन्दर किनभने.